Colaadda Israa’iil iyo Falastiin: Maxaa shucaac loogu furay khariidada Qaza ee Google? – ASM Raage
Colaadda Israa’iil iyo Falastiin: Maxaa shucaac loogu furay khariidada Qaza ee Google?
Posted byabdullahi87 May 19, 2021 May 19, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Qoraalka sawirka,Sawirrada Qaza ee aan nadiifka aheyn
Maxaa shucaac loogu furay khariidada Qaza ee Google oo kamid ah meelaha ugu dadka badan dunida?
Waana arrin ay inta badan soo hadal qaadeen cilmi baarayaashaa oo adeegsanaya ilo wareedyo madaxbanaan iyo macluumada kale oo ay kamid tahay macluumaadka khariidada adduunka si loo ogaado goobaha ay duqeymaha ka dhacayaan iyo khasaaraha ka dhashay colaadda.
Arrinta dhabta ah waxay tahay, in Israa’iil iyo Falastiin ay kasoo muuqdaan kharidada Google balse muuqaal ahaan tayada sawirrada Sattelite-ka ma wanaagsano iyadoo muuqaallo tayo leh laga heli karo shirkadaha Sattelite-ka.
Marka aad khariidada eegeysid waxaa adag in aad aragto baabuurta yaalla waddooyinka marinka Qaza.
Marka loo barbardhigo caasimadda Kuuriyada Waqooyi ee Pyongyang, oo ah meel ay adagtahay in la ogaado waxaad khariidada Google ka dhex arki kartaa baabuurta waddooyinka yaalla iyo xitaa dadka.
Qoraalka sawirka,Sawirrada Qaza (Bidix) iyo sawirrada caasimadda Pyongyang, ee Kuuriyada Waqooyi (Midig)
Maxay muhiim u yihiin sawirrada Sattelite-ka?
Waxay kaalin weyn ka qaataan in laga soo warramo goobaha ay colaadaha ka taagan yihiin ee aan marar badan la tagi karin sababo la xiriira walaaca ah in helitaanka macluumaadkan ay halis gelin karaan amniga.
Dagaalkii ugu dambeeyay Israa’iil iyo Falastiin, baarayaasha waxay isku dayayeen inay xaqiijiyaan goobaha rasmiga ah ay gantaallada ku dhaceen ama halka la bartilmaameedsanayay dhismooyinka ku yaalla Qaza iyo Israa’iil iyadoo la adeegsanayo Sattelite-ka.
“Runtii, arrinta dhib u dhac inagu keentay waxay aheyd in aan heli weynay sawirro Satellite-ka looga soo qaaday Israa’iil iyo marinka Qaza” ayuu yiri Samir oo cilmi baare madaxbanaan.
Balse sawirradii ugu dambeeyay ee laga soo qaaday Qaza ayaa u muuqday kuwo shucaac lagu furay.
Shirkadda Google waxay sheegtay in hadafkeedu uu yahay in mar kasta ay cusbooneysiiso sawirrada meelaha ugu dadka badan adduunka balse tallaabadan ma saameyn Qaza.
Sawirrada tayada wanaagsan ma yiiin kuwa la heli karo?
Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay, dowladda Mareykanka waxay xayiraad kusoo rogtay adeegsiga sawirrada tayada leh balse shirkadaha Mareykanka waxaa loo ogolaaday inay u adeegsadaan arrimo ganacsi uun.
Waxaa sanadkii 1997 la meel mariyay xeerka KBA si wax looga qabto walaac dhanka amniga ay muujisay Israa’iil.
Wuxuu xeerkan ku wajahnaa Israa’iil oo kaliya ah, waxaana loo adeegsaday in xayiraad lagu soo rogay sawirrada laga soo qaado dhulka Falastiiniyiinta, xeerkan ayaa xayiraad kusoo rogaya in laga soo qaado sawirrada tayada leh.
“Haddii aan nahay Israa’iil waxaan mar kasta qaadnaa sawirro tayadooda aanan wanaagsaneyn” ayuu yiri Amnon Harari oo ah madaxa arrimaha hawada sare u qaabilsan wasaaradda gaashaandhigga ee Israa’iil, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
“Waa in mar kasta shucaac lagu furaa baddalkii si cad loo arki lahaa”
Si kastaba, sida shirkadda laga leeyahay Faransiiska ee Airbus waxay awoodda inay faafiso sawirrada laga soo qaado gobolkan ee tayada wanaagsan leh, Mareykanka wuxuu la kulmaya cadaadis ah in xayiraaddan uu qaado.
Bishii July ee sanadkii 2020, waxaa meesha laga saaray xeerka KBA, haatan Mareykanka wuxuu shirkadihiisa u ogolaanaya inay soo qaadaan sawirro tayo leh oo ku saabsan gobolka si loo arko agabka ama dadka kasoo dhex muuqanayo sawirka.
“Waxaan u baahanahay in aan helno sawirro aad tayo leh oo laga soo qaaday dhulka Falastiin si lamid ah sawirrada kale ee laga helay qeybaha kale ee gobolka” ayuu yiri Michael Fradley oo ah aqoonyahan ku takhasusay taariikhda banii’aadanka oo ka tirsan jaamacadda Oxford, wuxuu kamid ahaa dadkii ololaha u galay in xeerkaas wax laga baddalo.
Weli muxuu shucaac ugu jiraa sawirrada Qaza?
BBC waxay la hadashay shirkadaha Google iyo Apple (kuwaas oo bixiya adeegyo qaabilsan sawirrada satellite-ka).
Shirkadda Apple waxay sheegtay in dhawaan ay khariidada Qaza ay ka dhigi doonto mid si wanaagsan loo arki karo.
Google waxay dhankeeda sheegtay in sawirrada Qaza ay ka heshay ilo kala duwan isla markaana ay ka baaraan dageyso sidii ay uga dhigi laheyd kuwa tayadoodu sarreyso marka uu qorshaha diyaar noqdo balse hadda uusan qorshe ugu jirin in sawirrada tayada leh ee marinka Qaza ay baahiso.
Maalintii ay Israa’iil qabsatay Qudus iyo qorshihii fuley
Ururka Xamaas oo soo saaray xukun adag oo ay caro ka dhalatay
Qoraalka sawirka,Sawirrada ku jira khariidada Google iyo sawirka shirkadda Max ee Satellite-ka
“Marka la eego muhiimadda ay leedahay tebinta xaaladaha taagan, ma arki sabab ku aadan inay sii socdaan in sawirrada deegaanka meesha laga saaro” Nick Waters oo ah cilmi baare madaxbanaan oo ka tirsan barta Bellingcat ee Twitter-ka.
Yaa soo qaada sawirrada?
Shirkadaha qaabilsan khariidada sida Google Earth iyo Apple Maps waxay ku tiirsan yihiin shirkadaha qaabilsan Satellite-ka ee bixiyo sawirrada.
Maxar iyo Planet Labs oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ayaa haatan ku gudo jiraa sidii ay usoo bandhigi lahaayeen sawirro tayadoodu wanaagsan tahay oo laga soo qaaday marinka Qaza iyo Israa’iil.
Baarayaasha ka tirsan ilo wareedyada madaxabanan ayaa sheegayaa in si weyn ay ugu tiirsan yihiin adeegyada bilaashka ah ee qaabilsan khariidada balse aysan heli karin muuqaallada tayada leh ee laga soo qaaday Qaza.
Maxay soo bandhigayaan sawirrada tayada leh?
Sawirrada lagu soo qaado satellite-ka waxaa loo adeegsadaa dhowr siyaasbood, waxaana kamid ah in lagula socdo dhaqdhaqaaqa xaalufinta deegaanka iyo dabka ka kaca keymaha iyo sidoo kale baaritaanada ku aadan tacaddiyada xuquuqda aadanaha.
Cilmi baarayaasha ka tirsan Ha’yadda xuquuqul insaanka Human Rights Watch ayaa 2017-kii iskaashi la sameysay shirkadda satellite-ka ee Planet Labs si loo ogaado xasuuqii militeriga Myanmar ay ku hayeen muslimiinta laga tiro badan yahy ee Rohingya.
Qoraalka sawirka,Sawir lagu soo qaaday satellite-ka oo muujinaya dhibaatada loo geystay muslimiinta Rohingya ee Myanmar
Sawirrada waxay horseedeen khasaaraha soo gaaray in ka badan 200 guri oo ku yaalla Myanmar kadib markii ay isbarbardhig ku sameeyeen sawirrada satellite-ka iyo sawirradii hore laga soo qaaday deegaanka.
Caddeymahan waxay u muuqdeen inay xaqiijinayaan arrinta ay ku anddacooneyaan qowmiyadda Rohingya ee ah in dhulkooda ay kasoo qaxeen kadib markii militeriga ay bartilmaameedsadeen guryahooda.
Qoraalka sawirka,sawir satellite-ka lagu qaaday oo muujinayo xeryaha dhaqan celinta ee ku yaalla Gobolka Xinjiang, ee Shiinaha
Sawirrada satellite-ka waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaateen in la ogaado waxa ka socday gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha gaar ahaan xarumaha ‘dhaqan celinta’ ee lagu hayo bulshada Uyghurs.
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalka Jowhar iyo Qaar kamid ah Ilaalada Cali Guudlaawe oo
Guddiga Farsamada Arimaha Doorashooyinka oo kulan ku yeeshay muqdisho